Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Kirk Ziehm nanendry Tale jeneralin'ny Buildout vaovao
Buildout, mpitarika ny automatisation marketing CRE, dia nanendry an'i Kirk Ziehm ho tale jeneralin'ny orinasa vaovao. Mpitondra mahay sy za-draharaha, Kirk dia hitondra rakitsoratra efa niorenan'ny 20+ taona niavaka tamin'ny fahaiza-mitarika, fitantanana ny asa ary fifantohana stratejika mba hitarika fahombiazana amin'ny fanavaozana ny fanavaozana ny Buildout.
Talohan'izay, Kirk dia nitana andraikitra ambony amin'ny mpitarika teknolojia toa an'i Zego (Powered by PayLease), SeatGeek, ary Cvent. Vao haingana indrindra, i Kirk dia COO an'ny Zego (Powered by PayLease), ilay orinasam-teknolojia momba ny fananana izay manampy ireo mpandraharaha hanavao ny traikefan'ny mponina azy ireo ary hampiakatra ny fitazonana azy ireo.
"Ny Buildout dia manana tantara manankarena amin'ny fanompoana ny vondrom-piarahamonina mpampindram-bola ara-barotra," hoy i Ziehm. “Manantena ny hiara-hiasa amin'ny ekipanay manan-talenta izahay hanohy hanolotra sy hanatsara ny vahaolana arahinay amin'ny kilasy manerana ny androm-piainan'ny CRE. Manomboka amin'ny marketing ka hatrany amin'ny CRM ka hatrany amin'ny backoffice - ny North Star dia manome alalana ireo mpanjifanay mahatalanjona hanakatona fifanarahana bebe kokoa, hanana fahitana bebe kokoa manerana ny fikambanan'izy ireo ary hiditra amin'ireo angon-drakitra tsara kokoa ao anatin'ny tsenan'izy ireo. "
Kris Krisco, Chief Customer Officer ary mpiara-manorina ny Buildout, dia nilaza hoe: “Tena faly sy sambatra izahay manana an'i Kirk ao amin'ny ekipanay. Ny traikefany mitarika, manatsara sy manatsara ny asany dia ho lakilen'ny fahombiazan'ny mpanjifanay sy ny traikefany. Mamiratra ny ho avy ho an'ireo mpivarotra ara-barotra! ”